Biyo kulule & Waaberi oo Caawa u soo gudbay Wareega 6da Xaafadood ee Kediska – SBC
Biyo kulule & Waaberi oo Caawa u soo gudbay Wareega 6da Xaafadood ee Kediska
Tartanka Kediska bisha Ramadaan ee SBC International ayaa waxaa uu marayaa heer xasaasi ah oo ay ku wada tartamayaan wareegiisii labaad 12 xaafadood.
Xalay ayaa waxaa Tartan Aqooneedkan ku wada tartamay 4 xaafadood kuwaas oo ay ka soo bexeen 2 xaafadood halka 2 kalena ay ka hareen Tartanka.
Qeybtii hore ayaa waxaa ku wada tartamay xaafadaha New Dhahar oo Degmada Dhahar ee gobolka Haylan ah iyo Xaafada waaberi oo Garoowe ku taala.
Labadani xaafadood aya waxay soo bandhigeen tartan aad loola dhacay waxaana ay ku soo dhamaatay meeshaasna ku soo baxday xaafada Waaberi Garoowe.
Qeybtii labaad ayaa waxaa ku wada tartamay xaafadaha Biyo Kulule Boosaaso iyo Xaafada Hanti wadaag Garoowe,
iyana waxaa ay soo bandhigeen Tartan aad u xiiso badan waxaana halkaasi ku soo baxday xaafada Biyo Kulule Boosaaso
Labadan xaafadood ee soo baxay ayaa waxay ku biirayaan xaafadaha Hodan Garoowe iyo Xingood Qardho oo iyagu Habeen hore soo baxay,
Caawa ayaa waxaa tartanka ku wada tartami doona xaafado aad u adag oo ku caan ah Tartanka Kediska SBC waa Xaafadaha Laanta Hawada Boosaaso Vs Xorgoble Qardho waa qeynta hore, waxaana qeynta dambe wada kulmi doona xaafadaha Raf iyo raaxo Boosaaso Vs Qoryacad Qardho.
Labadii habeen ee ugu dambeeyay ee uu socday wareegan waxaa soo laab laabtay is qabqabsi iyo cabashooyin ay soo gudbinayaan ka dib dhamaadka kulamada xaafadaha tartamay, kuwaas oo soo celiya su’aalo la is weydiiyay, taasna waxay keentay in la isla gaaro ilaa xili dambe